I Ivar dia nanomboka ny fampielezana takelaka anaty rano tamin'ny alàlan'ny fanambarana ny fahitana antontan-taratasy tamin'ny taona 1950 izay manome sarintany amin'ireo takelaka takelaka napetraky ny mpanorina ny fisakafoanana tao Puget Sound. Raha ny tokony ho izy, Haglund dia nieritreritra ny ho avy izay hitondran'ny mpanjifa ny sambo mpisitrika anaty rano manokana ary nametraka takelaka fanaovana sonia tao amin'ny Sound izy mba hahazoany tombony amin'ny fanaovana dokam-barotra amin'ity demografika mitondra fiara anaty rano ity. Avy eo, nipoaka ny vaovao fa nahitan'ny tantsambo ny iray amin'ireo dokambarotra fanaovana takelaka tena izy avy any ambanin'ny Puget Sound. Ny takelaka vita amin'ny hazo izay azo dia nanao dokam-barotra ho an'ny 75 cents fotsiny ny lovia kely iray hazo ary noravahana loko sy barnakoraky ny toetr'andro. Tratra ihany koa ny takelaka fanaovana takelaka hafa.
Mivaha ny Hoax
I Ivar dia nikasa ny hitazona ny hosoka mandra-pahatapitry ny fampiroboroboana ny doka, saingy nanomboka nikatona ny kodiarana taorian'ny nahitan'ny fampielezan-kevitra ny fisian'ny famoahana trano fisakafoanana malaza. Rehefa nanontaniana momba ny tantara i Donegan dia nanaiky fa ny fahitana dia a fanentanana amin'ny marketing viral izay nanjary somary tsara lavitra noho ny nandrasana. Taorian'ity fanekena ity dia nanomboka nanameloka ny mpitantana orinasa Ivar ny sasany tamin'ireo olona noho ny fambolena takelaka sy ny famitahana ny vahoaka. Paul Dorpat, mpahay tantara ao amin'ny fanjakana Washington dia nahazo hafanana ampahibemaso koa noho ny filalaovany niaraka tamin'ity farany ity.
Na eo aza ny fotoana fohy fampahalalana ratsy, nahomby ity fanentanana ara-barotra famoronana ity! Nandritra ny fampielezan-kevitry ny takelaka, nitombo ny varotra clam chowder Ivar mihoatra ny 400 isan-jato, mitsambikina mihoatra ny 60,000 ny varotra raha oharina tamin'ny taona lasa. Araka ny porofoin'ity lahatsoratra ity, mahatadidy ity fampielezan-kevitra amin'ny famoronana marketing ity ny olona ary mbola miresaka momba izany ihany. Fikarohana Google ho an'ny Ireo takelaka takelaka Ivar's Undersea Hoax mamerina valiny maherin'ny 360,000.